Vaovao - Inona avy ireo faritra mety amin'ny milina marina
Inona avy ireo faritra mety amin'ny milina marina
Fantatsika fa ny milina mazava tsara dia mitaky fitakiana avo lenta amin'ny fametahana, ny famaritana mazava tsara dia manana fahamendrehana tsara, ny famokarana avo lenta ary ny fametrahana fitaovana marina, ka afaka manodina ampahany misy zavatra takiana mazava tsara. Ka inona avy ireo faritra mety amin'ny milina marina? Ireto manaraka ireto dia natolotry ny Xiaobian:
Voalohany indrindra, raha ampitahaina amin'ny lathes mahazatra, ny lathes CNC dia manana fikirakirana haingam-pandeha tsy miovaova, na inona na inona endrika farany latina na ny savaivony ivelany misy savaivony hafa dia azo zahana amin'ny hafainganam-pandehan'ny tsipika ihany, izany dia ny miantoka ny lanjan'ny fahamendrehana ambonimbony ary somary kely ihany. Ny lathe mahazatra dia misy hafainganam-pandeha tsy miova, ary ny hafainganam-pandeha dia miovaova miaraka amin'ny savaivony. Rehefa tsy miova ny fitaovam-piasana sy ny fitaovana, ny famerenam-bola ary ny zoro fitaovana, dia miankina amin'ny hafainganam-pandrefesana sy ny hafainganam-pandehan'ny fahaterahana ny fahasarotana amboniny.
Rehefa manamboatra sehatra misy karazana fahamendrehana ambonimbony dia ampiasaina ny tahan'ny fahana kely ho an'ny velarana misy hadalana kely, ary ny tahan'ny fahana ambony kokoa dia ampiasaina ho an'ny faritra misy hadalana be, izay misy fiovana tsara, izay sarotra tanterahina amin'ny lathes mahazatra . Sombiny contoured sarotra. Ny fihodinan'ny fiaramanidina rehetra dia mety ho amin'ny tsipika mahitsy na amin'ny zoro boribory. Ny milina mazava tsara ao amin'ny CNC dia misy fiasan'ny interpolation boribory, izay afaka manodina ny faritra mihinana sarotra. Ny fampiasana masinina mazava tsara cnc dia mitaky ny fampiasana tsara ataon'ny mpandraharaha.
Ny famaritana mazava tsara ao amin'ny CNC dia ahitana ny fihodinana tsara, fanalefahana tsara, fikosoham-bary tsara, fikosoham-bary ary fikosehana tsara:
(1) Fihodinana tsara sy mankaleo tsara: Ny ampahany betsaka amin'ny firaka maivana (aliminioma na manezioma manify) ampahany amin'ny fiaramanidina dia voahitsin'ity fomba ity. Fitaovana diamondra kristaly tokana voajanahary no ampiasaina amin'ny ankapobeny, ary ny tadin'ny zoro amin'ny sisin'ny lelany dia latsaky ny 0,1 micron. Ny milina amin'ny latina avo lenta dia mety hahatratra ny fahamendrehan'ny micron 1 sy ny tsy fitoviana eo an-toerana miaraka amin'ny fahasamihafana eo amin'ny haavony latsaky ny 0,2 micron, ary ny fahitsiana mandrindra dia mety hahatratra ± 2 micron.
(2) Fikosehana tsara: ampiasaina amin'ny milina fanodinana aliminioma na firafitra beryllium misy endrika sarotra. Miantehitra amin'ny fahamendrehan'ny torolàlana sy ny spindle an'ny fitaovana milina hahazoana ny mari-pahaizana toerana ambony kokoa. Fikosehana haingam-pandeha haingam-pandeha miaraka amin'ny tendron'ny diamondra voadidy tsara ho an'ny fitaratra marina.
(3) Fitotoana tsara: ampiasaina amin'ny vatan'ny masinina na ampahany amin'ny lavaka. Ny ankamaroan'ireo faritra ireo dia vita amin'ny vy mihamafy ary manana hamafin'ny tany. Ny ankabeazan'ny familiana masinina avo lenta dia mampiasa bearings tsindry hydrostatic na dynamique mba hiantohana ny fitoniana avo. Ankoatry ny fitaoman'ny hamafin'ny fantsom-pitaovan'ny milina sy ny fandriana, ny marina indrindra amin'ny fikosoham-bary dia mifandraika amin'ny fisafidianana sy ny fifandanjan'ny kodiarana fitotoam-bary ary ny fahamendrehan'ny masin'ilay lavaka afovoan'ny workpiece. Ny fikolokoloana tsara dia mety hahatratra ny refy marina amin'ny micron 1 sy ny micron 0,5 ivelan'ny fihodinana.
(4) Fitotoana fikosoham-bary: fisafidianana sy fanodinana ampahany tsy voapaika namboarina teo amboniny hamboarina amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fikarohana ifanaovan'ny faritra mifanentana. Ny savaivony potika marokoroko, ny hery fanapahana ary ny hafanana manapaka dia azo fehezina tsara, ka io no fomba fanaovana masinina marina indrindra amin'ny haitao fametahana mazava tsara. Ny fizarana hydraulic na pneumatic an'ny ampahany servo marina ao amin'ny fiaramanidina sy ny faritra misy ny motera gyro pressure pressure dia voahodina toy izao mba hahatratrarana ny 0,1 na 0,01 micron ary ny tsy fitovian'ny mikrô 0,005.
Fotoana fandefasana: Mey-27-2020